राशिफल Archives - Onlines Time
Jan32022 by puspaNo Comments
आज पुस १९ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आ उनेछ । भोगबिलासमा समय ब्यतित हुनेछ । बोलिमा मधुरता छाउनेछ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको प्रारम्भ हुनेछ । बिश्वासिला ब्यत्तीहरुबाट धोका हुन सक्ने योग रहेकोछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) दम्पति बिच सामान्य मनमुटाब रहला । बाणी तथा स्वास्थ क्षेत्रमा ध्यान दिएको बेश हूनेछ । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिच सम्बन्ध सुधार रहनेछ । गरीरहेकोकार्यमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुनाले शारीरिक आलस्यताले सताउनेछ । समय त्यति राम्रो रहेकोछैन । मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) जीवन सार्थीको सहयोगमा ब्यापार ब्यबसायमा राम्रै समय रहेको छ । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ । ब्यापार ब्यवसायमा समय खर्चिदा उत्तम रहनेछ । पारीवारिक समस्याले भने सताउन ...
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन !, हेर्नुहोस् पुस १५ गते । बिहीबारको राशिफल
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) पढाई लेखाईमा खर्चिएको समयबाट भनेजस्तो नतिजा हात लाग्ने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रेमको गाठो कसिनेछ भने घर परिवार तथा आफन्तसँगको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्राप्तीको योग रहेकोछ भने बिलाशी बस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफुतिर लोभ्याउन सकिनेछ । बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) माया प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । बिधिन्न भौतिक तथा बिलाशि बस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन लोभ्याउँन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा मेहनेत गरे भन्दा राम्रो नतिजा हात लाग्ने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । समयमा काम बन्ने हुनाले अन्य क्षेत्रमा लगानि गर्ने बाताबरण बन्नेछ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानि हुनेछ भने व्यापारकै शिलशिलामा रमाईलो यात्रा हुनेछ । मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) प्रतिस्पर्धिहरुलाई किनार लगाउँदै आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमा...
Dec212021 by onlinestimeNo Comments
एक मुखे रुद्रा’क्षको दर्शनले यसरी नसोचेको ठाउँबाट धन “लाभ” हुन्छ ॐ’ लेखि एक सेयर गर्नुहोस यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ । अत्यन्तै दुर्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ । विश्वासीहरूका अनुसार, यसलाई धारण गरे सुखशान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य र बुद्धि मिल्छ । चरक संहितामा पनि यसबारे उल्लेख छ, औषधीका रूपमा ।***थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस👇👇👇*** सिद्धियोग परेको बिहीबारका दिन आकाशबाट परेको पानी रुद्राक्षको फूलमा परी तत्काल बन्द हुँदा त्यसबाट एकमुखे रुद्राक्ष फल्न सक्छ भन्ने पनि शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा उल्लेख छ । परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना सानासाना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस...
Dec122021 by onlinestimeNo Comments
सपना शास्त्रको अनुसार सपनाले भविष्यमा हुने घटनाहरूलाई सूचित गर्छ। यी सपनाहरुले शुभ र अशुभ दुबै प्रकारका घटनाहरु बारे बताउँछन्। सपना शास्त्रका अनुसार यदि तपाईले आफ्नो सपनामा केहि विशेष चीज देख्नु भयो भने बुझ्नुहोस् कि तपाईं रातारात मालामाल हुनुहुनेछ। केहि खास सपनाहरूले भविष्यमा तपाईंले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभको बारेमा संकेत गर्छ। सपनाशास्त्रका अनुसार यदि तपाईंले आआफ्नो सपनामा मुसा देख्नुभयो भने यसलाई शुभ मानिन्छ। यो सपनाले भविष्यमा तपाईंले प्राप्त गर्ने अचानक धन लाभको तर्फ संकेत गर्छ। सपनामा मुसा देख्नाले गरिबी पनि हट्छ भने व् विश्वास गरिन्छ। जीवनमा समृद्धि आउँछ। स्वप्ना शास्त्रका अनुसार सपनामा गाई देख्नु पनि धेरै शुभ हुन्छ। गाईलाई फरक तरिकाले देख्नुको अर्थ पनि विभिन्न हुन्छ। यदि तपाईं सपनामा दूध दिँदै गरेको गाई देख्नुहुन्छ भने यसको मतलब तपाईंको परिवारमा खुशी र समृद्धि आउँदैछ। यस्तै,...
Dec82021 by onlinestimeNo Comments
यी राशि हुनेलाई शेयर बजारमा फाइदै फाइदा , हेर्नुहोस आजको राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल मंसिर २२ गते बुधबार इश्वी सन २०२१ डिसेम्बर ८ तारीख मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथी श्रवण नक्षत्र ध्रुव योग वव करण चन्द्रमा मकर राशिमा आनन्दादि योगमा छत्र योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणाय हेमन्त ऋतु विवाहपञ्चमी, जनकपुरमा सीता विवाहपञ्चमी मेला, आवाल ब्रम्हचारी षडानन्द जयन्ती (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) परीश्रम अनुरुपको फल प्राप्ती हुने समय रहेकोछ । सामाजीक कार्यका क्षेत्रमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यका क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहेनछ । पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) पारीवारीक मनोरञ्जनको निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । कार्य सम्पादनमा ढीलाई हुनाले सामान्य अप्जस सहनु ...
Oct282021 by onlinestimeNo Comments
भगवानसँग भुलेर पनि नमाग्नुहोस् यी ७ कुरा ! ॐ लेखेर सेयर गराै
भगवानसँग भुलेर पनि नमाग्नुहोस् यी ७ कुरा ! हामी विश्वमा भएका सबै मानिसहरु आफ्नो फरक फरक धर्म भएपनि आफ्ना पूजा गर्ने मन्दिर, गुम्बा अथवा विभिन्न ठाउमा गएर आफ्ने देवतालाई पूजा गछौ । तर यस देवतालाई पुजा गर्नुको पछाडि सबैको एउटा न एउटा स्वार्थ रहेको हुन्छ ।जब मानिस खुसी हुन्छ ,त्यसले कहिल्यैपनि देवताको पूजा गदैन् । तर जब मानिस कुनै पिडामा पर्छ तब उसले देवतालाई विभिन्न आफ्नो स्वार्थ अनुसारको वस्तुहरु माग्ने गर्दछ । त्यसैले तपाई पनि यसरी नै हेरक दिन पूजा गर्न जानुहुन्छ भने यस्तो कार्य भुलेर पनि नगर्नुहोस् यदि यी कार्य गरेको मागेको फल नपाउने मान्यता रहेको छ । ती कामहरु यी हुन् । १. पहिलो हो , शिव, गणेश अनी भैरवलाई तुलसी चढाउनु हुँदैन । २. त्यसैगरी दास्रो हो , स्नान नगरी तुलसीको पातलाई टिप्नु हुँदैन । शास्त्र अनुसार यदि कुनै व्यक्ति ननुहाइ तुलसीको पात टिप्छ भने पुजा गर्दा यस्तो पात ...
Oct262021 by onlinestimeNo Comments
आजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल कार्तिक ९ गते मंगलबार इश्वी सन २०२१ अक्टोबर २६ तारीख
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल कार्तिक ९ गते मंगलबार इश्वी सन २०२१ अक्टोबर २६ तारीख कार्तिक कृष्णपक्ष षष्ठी तिथी आद्र्रा नक्षत्र शिव योग गर करण चन्द्रमा मिथुन राशिमा आनन्दादि योगमा चर योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) बल तथा प्रराक्रममा बृद्धि हुनेयोग रहेकोछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहनेछ । आम्दानिको क्षेत्र मध्यम रहनेछ । धार्र्मीक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । अप्रत्याशीत खवरले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । दुर्घटनापुर्ण यात्राको सम्भावना रहेकोले सजग भइ यात्रा गर्नुहोला । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीताको योग बन्नेछ । स्वास्थमा सामान्य तनाबको योग बन्नेछ । आम्दानिको...
याे अचम्मकाे पिपल काे रुख, ॐ लेखी शेयर गर्नुहाे चिताएकाे पुग्ने छ।
कतिपय समयमा घरको वरपर यस्ता चिज आउँछन् जसले घरलाई कु’रुप बनाउँछ। पर्खाल कु’रुप बनाउने मात्र होईन क’मजोर पनि बनाउँछ । त्यसैले हामी घरको पर्खालमा उम्रिएका कुनै रुख बिरुवा हामी उखेलेर फा’ल्छौँ । हिन्दू धर्मग्रन्थ अनुसार पिपललाई निकै पवित्र विरुवा मानिन्छ। त्यसैले यसलाई उखेलेर फा’लेमा ठुलो पा’प लाग्दछ भन्ने पौराणि विस्वास रहँदै आएको छ। यस दो’षबाट कसरी बँच्ने भन्ने विषयमा ज्योतिषाचार्य पं. प्रफुल्ल भट्टले यस्तो सुझाब दिएका छन्। तपाईले घरको पर्खालबाट पिपलको बिरुवा उखेल्नुभयो भने अर्को स्थानमा लगेर सार्नुहोस्। जसले तपाई यसको अ’शुभ फलबाट बँच्न सक्नुहुन्छ । पिपलमा भगवान विष्णुको वास हुने विश्वास रहँदै आएको छ। त्यसैले यो दो’षबाट बँच्नका लागि दैनिक भगवान विष्णुको पूजा गरेर तुलसीको मालाले तल लेखिएको मन्त्रले जप गर्नुहोस् ऊँ वासुदेवाय नमः । पिपलको पूजा गर्दा भगवान शनिदेव प्रसन्न हुनुहुन्छ । प...
Oct242021 by onlinestimeNo Comments
आजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल कार्तिक ७ गते आइतबार इश्वी सन २०२१ अक्टोबर २४ तारीख
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल कार्तिक ७ गते आइतबार इश्वी सन २०२१ अक्टोबर २४ तारीख कार्तिक कृष्णपक्ष चतुर्थि तिथी रोहिणी नक्षत्र वरियान योग वालव करण चन्द्रमा बृष राशिमा आनन्दादि योगमा धाता योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन शरद ऋतु विश्व विकास सूचना दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) भोज भतेर जन्य कार्यमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । आफन्तजन बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । मित्रहरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि आई पर्न सक्नेछ । साजेदारी काममा लगानी नगरैकै बेश हुनेछ । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) मान प्रतिष्ठामा बृद्यि हुने योग रहेको छ । मनमा आट र शाहस को कमिले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । यात्रा मनोरन्जन पुर्ण रहनाले मन प्रशन्न र...
Oct192021 by onlinestimeNo Comments
काली माता साबित्रि जो शिवशक्तिको उपसना गर्नुहुन्छ ।साबित्रिको स्वरुपमा दक्षिणकाली माता भन्नुहुन्छ यश ब्राह्मणमा यो कलियुगको परिपेक्षमा आफुले चाहेको खण्डमा जे पनि गर्न सक्ने र गर्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । यश जगतबाट धर्म सधैका लागि नास भएर गैसकेको र सुद्द आत्माले कसैले पनि धर्मलाई अवलम्बन नगरेको र मात्रै देखावटी रुपमा यशलाइ अङ्गाल्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।धर्मको नाममा आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्न भन्दै भक्तहरु आफुसग आउने गरेको जुन निश्चय पनि आफुले नचाहेको र घोर कलियुग र बिनास/संकटको उपज भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । नत यहाँ छोराले बुवा भन्छ नत भाउजुले देवर नत छोरिले दाजुभाई नत आफ्नाले आफ्नालाई नै चिन्छन् ।सावित्री माता भन्नुहुन्छ अब ब्राह्मण नै तहसनहस हुने समय आइसकेको र यो कसैले पनि रोकेर रोक्न नसक्ने र आफुले पनि सोही बिनास र र क्तपात चाहेको उहाँ भविष्यमाणि गर्दै बताउनुहुन्छ । हेर्नुस् भिड...